I-Nikon D7000 yeeDummies Cheat Sheet
Ngekhamera yedijithali ye-D7000, uNikon uyangqina kwakhona ukuba awunyanzelekanga ukuba unike ingalo nomlenze- okanye uxinzelele umqolo nentamo yakho - ukonwabela ukufotwa kweDSLR. Ukongezwa kwe-D7000 kusapho lakwaNikon lwe-dSLRs alwenzi skimp kumandla okanye kwintsebenzo, ukubonelela ngeseti enkulu yeempawu zokukunceda uthathe ukufota kwakho ukuya kwinqanaba elilandelayo. Ukukunceda ukuba uqalise ukusebenzisa ikhamera yakho ye-D7000, nantsi ireferensi efanelekileyo kumaqhosha ekhamera kunye neefowuni kunye neendlela ezizenzekelayo nezihambileyo.
Ulawulo kwikhamera yakho yedijithali yeNikon D7000
Ukuba awuqhelananga nekhamera yedijithali yeNikon D7000, nantsi isikhokelo esikhawulezayo kumaqhosha ayo, ukucofa, kunye nolunye ulawulo lwangaphandle. Ikhithi ye-D7000 ithengiswa ngelensi ebonisiweyo, imodeli yeNikkor 18-105mm AF-S DX (UkuNcitshiswa koVibration). Ezinye iilensi zisenokungabi nolawulo olufanayo.
Iimowudi zokuBonakalisa eziZenzekelayo kwiKhamera yakho yeNikon D7000
Kubantu abatsha kwiikhamera zedijithali ze-SLR, i-Nikon D7000 ibonelela ngokuseto okuzenzekelayo okuvumela ukufota kunye nokufota. Ukufikelela kwiimowudi ngaphandle kwe-Auto kunye ne-Auto Flash, cwangcisa imowudi yokudayela kwi-Scene. Ukubeka iliso emva koko kubonisa uluhlu lweendlela ze-19 ezikhoyo zeMovie; ezi zidweliswe apha zimele ezo uya kuzifumana ziluncedo rhoqo.
Iimowudi zokuBonakalisa eziPhambili zeNikamera yeDijithali yeNonic D7000
Ukuthatha ngokwenene ulawulo loyilo ngeNikon D7000 DSLR yakho, nyukela kwenye yeendlela zokuvezwa, ezikuvumela ukuba uhlengahlengise ukuvula ( f -ma) ukusebenzisa ubunzulu bentsimi (indawo ekugxilwe kuyo) kunye nokulungelelanisa isantya se-shutter ukumisela ukuba ngaba izinto ezihambayo zibonakala zijolise ngqo okanye ziphazamisekile. Ukwafumana ukufikelela kwezinye izinto ezingafumaneki kwiimowudi ezizenzekelayo, ezinjengokhetho lokuhlengahlengisa amandla e-flash kunye nokulungelelanisa okumhlophe.
Iphe Ukuboniswa ngokuzenzekelayo kweNkqubo Ikhamera ikhetha zombini i-f-stop kunye nesantya se-shutter ukuqinisekisa
Ukuvezwa okufanelekileyo, kodwa ungakhetha kwindibaniselwano ezininzi ze
UKUYA Ukubekwa kwindawo ephambili ngokubonisa ngokuzenzekelayo Ubeka ukuvula ngokujikeleza i-Sub-command dial; ikhamera
Ikhetha isantya se-shutter esifanelekileyo ukuvelisa ukubonakaliswa okuhle kuloo nto
S Ishutter-ephambili Ukubonakaliswa ngokuzenzekelayo Ubeka isantya se-shutter ngokujikeleza eyona ndlela iphambili yokudayala; i
ikhamera ikhetha i-f-stop eya kuvelisa ukubonakaliswa okuhle kwi
isantya se shutter esikhethiweyo.
M Ukubonakaliswa kwesandla Ulawula zombini isantya se-shutter kunye ne-f-stop; Jikelezisa eyona
ukucofa komyalelo ukuseta isantya se-shutter, kwaye usebenzise ucofe-Sub-command ucofa ku
Cwangcisa i f-stop.
U1 kunye ne-U2 Iindlela zoMsebenzisi Yenza iindlela zokubhengeza ngokwesiko kwimenyu yokuCwangcisa.
I-Wellbutrin yeyona maoi
I-mupirocin mafutha e-acne
tri previfem ulawulo lokuzalwa
ipilisi etyheli 93/12
indlela yokuphendula ku-shalom
udlala njani eucher
amagama eepilisi zokulala